Nepal Dayari | सुपादेउराली माइले सबैकाे रक्षा गरून् ! हेर्नुस् माघ २८ गते शुक्रबारको राशिफल https://nepaldayari.com/archives/12684
सुपादेउराली माइले सबैकाे रक्षा गरून् ! हेर्नुस् माघ २८ गते शुक्रबारको राशिफल https://nepaldayari.com/archives/12684
माघ २८, २०७८ शुक्रबार १६२ पटक हेरिएको
सुपादेउराली माइले सबैकाे रक्षा गरून् ! हेर्नुस् माघ २८ गते शुक्रबार को राशिफल
मेष: बुधबार कार्यक्षेत्रमा राम्रो सफलता मिल्नेछ। तपाईंको धन सही काममा खर्च हुनेछ। विद्यार्थीहरूले परीक्षामा राम्रो गर्नेछन् तर मनमा डर रहनेछ। यस बाहेक कसैलाई ऋण दिन नदिनुहोस्। व्यापार र पैसाको लागि तपाईको दिन मिश्रित रहनेछ।
वृष: यो बुधबार तपाईको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ, जसका कारण तपाईको दिनभर बेचैनीमा बित्नेछ। काममा कसैको सहयोगले लाभ मिल्नेछ । यसका साथसाथै चतुराई प्रयोग गरेर जुनसुकै काममा सफलता मिल्नेछ । आफ्नो इच्छा अनुसारको कार्य योजना पूरा हुनेछ।
मिथुन: बुधवारको दिन खुशीले सुरु हुनेछ। परिवारसँग राम्रो समय बित्नेछ। नोकरीमा राम्रो आर्थिक लाभ हुनेछ र पदोन्नतिको संकेत मिल्नेछ। यसैबीच, व्यापारीहरूको लागि नाफाको अवस्था छ।
कर्कट: यो बुधबार भाग्यको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना छ र कार्यक्षेत्रमा लाभको स्थिति पनि रहनेछ। परिवारमा केही शुभ कार्यक्रम हुनेछ जसमा तपाई सहभागी हुनुहुनेछ। साथै, तपाईको सम्पूर्ण दिन रमाइलोमा बित्नेछ।
सिंह: तपाईको बुधवारको सम्पूर्ण दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग राम्रो समय बित्नेछ। काममा राम्रो धन प्राप्त हुनेछ। तपाईको आर्थिक पक्ष यस बुधबार बलियो हुनेछ। तपाईको दिन शुभ हुनुका साथै भाग्य पनि राम्रो रहनेछ ।
कन्या: बुधवार तपाईको भाग्यको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। व्यवसायका लागि बुधबारको दिन राम्रो रहनेछ। विशेषगरी व्यापारी वर्गले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्, जसका कारण लाभको योग रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । परिवारको तर्फबाट चिन्तामुक्त रहनुहुनेछ।
तुला: यो बुधबार तपाईले आफ्नो परिवारको हेरचाह गर्नुहुनेछ र उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट परिवारका सदस्यहरूका लागि पनि समय निकाल्नुहुनेछ र उनीहरूसँग राम्रो समय बिताउनुहुनेछ। यस बुधवार परीक्षा आदिमा विद्यार्थीहरूले सफलता प्राप्त गर्नेछन्।
वृश्चिक: बुधवार तपाईंले बेचैन महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईको कमजोर स्वास्थ्य तपाईको अस्वस्थताको कारण हुनेछ। विद्यार्थीको मन पढाइमा लाग्ने छैन । काम गर्ने व्यक्तिलाई काममा बाधा अड्चनले सताउनेछ। यस बाहेक व्यवसायी वर्गको अवस्था सामान्य रहनेछ ।
धनु (धनु) : यो बुधबार भाग्यको पूर्ण साथ नमिल्ने तर अदालतसँग सम्बन्धित कुनै मामिला भएमा त्यसमा केही राहत मिल्नेछ । तपाईको मानसिक सुस्ती समाप्त हुनेछ र तपाईलाई सबै पक्षबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ।
मकर: बुधवार तपाईले आफ्नो कार्यस्थलमा सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुनेछ। तपाईलाई समय-समयमा आफ्ना सहकर्मीहरूको समर्थन प्राप्त हुनेछ। साथै, तपाईं राम्रो पैसा कमाउन सक्षम हुनेछ। पारिवारिक सुख मिल्नेछ । यसका अलावा बालबालिकालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
कुम्भ: बुधवार तपाईको कार्य क्षेत्रमा लाभदायक साबित हुनेछ। सबैसँग मिठो व्यवहार हुनेछ। व्यवसायमा लाभदायक स्थिति रहनेछ। जनताबाट सम्मान पनि मिल्नेछ । नोकरीमा उच्च अधिकारीबाट प्रशंसा पनि मिल्नेछ । यसबाहेक, तपाईं पदोन्नति पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
मीन: यो बुधबार धन र धनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। धन सम्वन्धी मामिलामा राम्रो हुनेछ । पुरानो साथीसँग कुराकानी हुन सक्छ। आज बुधबार तपाईको मन प्रसन्न रहनेछ। द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने हुनाले तपाईको दिन खासै राम्रो रहनेछैन।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन, फाल्गुन १० गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
माघ २६ गते बुधबार यस्तो छ तपाईको राशिफल पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन
माघ २४ गते सोमबार ,यस्तो छ तपाईको राशिफल पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन
माघ २३ गते आइतवार ,यस्तो छ तपाईको राशिफल पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन
माघ २२ गते शनिवार यस्तो छ तपाईको राशिफल पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन